Boodhari iyo fanka casriga ah | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com
DR:Liban Mukhtar Ramadan Avobankz
indian song vidoes
sos pictures page
Boodhari iyo fanka casriga ah
Posted by Liban Mukhtar Avobankz on April 14, 2012
dhaqanka bulshooyinku ma aha waxa cirka ka yimiday ama dhulka ka soo baxa, ee waa silsilad ay guntin waliba mid kale haysato. Marxalad walba oo nololeed waxaa saameeya mid ka horraysey, halka ay iyaduna sii saamayso ta xigta. Haddaba dhammaadkii soddonnadii iyo bilawgii afartannadii qarnigii tegey Geyiga Soomaalida waxaa ka abuurmay xaalad ku cusub fanka iyo halabuurka soomaalida taas oo noqotay, ilaa maantana ah, mid aad u xiise iyo taageerayaal badan. Xaaladdaasi waa heesaha casriga ah ee muusigga loo tumo.
Dad bay la tahay muusigga iyo fanka la xiriiraa in uu dhaqanka soomaalida ku yahay soogalooti, laakiin ma aha ee qalabkaas iyo adeegsigiisu siyaalo kala duwan ayuu weligii dhaqanka ugu soo jiray, ay ka mid yihiin durbaanka iyo haanta oo munaasabado faneed badan loo adeegsan jiray. Taas waxaa dheer jiibta, jaanta iyo sacabka lagu qurxiyo dhammaan ciyaar dhaqameedda taas oo iyaduba ah muusig dabiici ah. Noocyada maansada oo dhan mid walba sida loogu luuqeeyaa iyaduna wax kale ma aha ee waa muusig. Taas oo jirta haddana markii la magaaloobay waxaa loo baahday si iyo qalab cusub oo lagu bulsheeyo la iskuna maaweeliyo. Halkaas ayuu fanka casriga ah ee aynu maanta naqaan ka soo baxay. Marka laga reebo qaddar saamayn ah oo muusigga iyo masraxa (ruwaayadda) ka soo galay dhanka Suudaan iyo Yaman, halabuurka suugaaneed ee casriyaynta fanka loo adeegsaday waa dhalad si walba ugu abtirsada fanka iyo waayaha soojireenka ah ee soomaalida, wuxuuna ka beermay iniino asal ah oo ku aasnaa dareenka bulshada. Dhinac kasta oo aynu ka eegno waxaynu arkaynaa run ahaantii arrintu in ay sidaas tahay. Waxaanse inoo soo qaadayaa waxyaalaha ugu waaweyn ee fanka casriga ah dhaliyey. 1. Cilmi-Boodhari: Soddonnadii qarnigii tegay waxaa magaalada Berbera caan ka noqday nin barbaar ah oo miyiga kuraynimo kaga yimid. Ninkaas waxaa goor aroor ah ku dhacay jacayl aan xad lahayn uu u qaaday gabadh ay isku magaalo ahaayeen oo lagu magacaabi jiray Hodan Cabdulle Walanwal. Waa Cilmi Ismaaciil Liibaan oo lagu naanayso “Boodhari”. Dadka oo dhan jacayl wuu ku dhacaa, waxaase ninkaas u gooni ahaa dhawr arrimood oo ay ka mid yihiin: in uu jacylkiisu ahaa mid ka sarreeya heerka caadiga ah, in uu arrintaas darteed noloshii kale oo dhan wadi kari waayey farahana ka qaaday, in uu ahaa afmaal dantiisa iyo dareenkiisa gabay ku sheegan kara – isla markaas oo gabaygu ahaa wax aad loo qiimeeyo – iyo in uu jacaylkiisa u soo bandhigay si cusub oo lala wada yaabay. Taasi Boodhari waxay u soo jiidday in ay dad badani ku jeclaadaan dad kalena ku nacaan. Dadka ku jeclaaday waxay u badnaayeen reer magaalka iyo dhallinyarada, kuwa ku nacayna sida la garan karo waa dadkii dhaqanraaca ahaa ee ragannimada u yaqaanney adkaysiga iyo yasidda nugaylka. Ugu dambayn markii uu Cilmi-Boodhari jacaylkaas u geeriyooday isaga oo ka tegey gabay iyo sheeko dheer oo xanuun badan wuxuu noqday shakhsi aan qof maqlay ismoogaysiin karin. Haddaba maansada iyo xaaladdii nololeed ee Boodhari waxay saldhig u noqdeen fanka casriga ah, waxaana dhimashadiisa ka dib tusaale iyo dhiirrasho ka dhigtay fannaaniinta iyo dad kale oo badan. Marxaladdii koowaad ee fanka noocan ah waxaa lagu bilaabay meerisyo gabay ah oo la sawrac ah kuwiisii laakiin lagu qaaday luuq ka duwan tii gabayga. Koox gole wada fadhida ayaa si subcis ah u wareejin jiray, oo qofba markiisa qaadi jiray, beydad tiro yar, kuwaas oo mid waliba uu isagu samaystay. Waxaa ka mid ah afartan meeris oo aan ku arkay hordhaca buug tayo xun oo lagu magacaabo “Diiwaanka heesaha” kaas oo uu qoray Maxamed Sh. Xasan (Stockholm): jawharad aan shalay arkoo aqal ka soo jeedday jeedaaladaan eeg is-idhi sow ma jabi gaadhin … Muxubbaba tallaabada markay midigta qaadayso ma malaa’ig baa ruuxu waa muunad gooni ahe Saamaynta uu Boodhari arrinta ku yeeshay waa mid u muuqanaysa qof kasta oo u wada fiirsada gabayadiisa iyo hees-faneedda. Sida furan ee xorta ah ee uu ninkaasi dareenkiisa u cabbiray ma ay noqon oo keliya mid fanka loo adeegsaday, ee waxay kale oo noqotay si uu qof walba oo caashaq xanuunjiyaa naftiisa ugu baroordiiqo. Isu ekaanta maansada Cilmi-Boodhari iyo fanka cusub tix walba waa laga heli karaa, balse aynu isbarbar dhigno islana aragno dhawr tusaale: Boodhari: caashaqa haween waa horaa Caaddil soo rogaye Sayidkii Carshiga fuulay iyo Caliba soo gaadhye waxaa qaarba cayn looga dhigay ha iscajabiyeene soomaalidaa caado xune iguma caydeene Qaraami: cusbiyo kama maarmo geelu carroo cirkiyo wuu og yahay halkii cosob lehe = roob ceeb ma aha in aan ku caashaqaye cidliyo ha igu dhaafin ciirsila Boodhari: hillaac baa Berbera iiga baxay Hodan agteediiye hurdadana habeenkii ma ledo haddiyo waagiiye sida hoorrimaad baa qalbigu ii hanqanayaaye Qaraami: sidaan kuu bartayba hurdada ma bogtoo barkimaan hadba beerka saaraa Boodhari: sidii qaalin dhugatoobayoo geelii wada dhaafay dhallinyaro ma raacee kelaan dhaxanta meeraaye Qaraami: sidii geed ku yaal Bankii Geriyaad goonidu waa mid la iigu talo galay Boodhari: gadiidkii aan toosaba adaan kuu guntanayaaye sidii aad gidaar tahay maxaa kaa i garab taagey Qaraami: dhillawyahankaa dhirtuun ka baxee = qadow, geed dhirta kale ka dul baxa maxaa dhexda iigu kaa maray Tix ka mid ah kuwa ugu qurux badan gabayga Boodhari oo uu naftiisa ku hiifayo gardarrada jacaylkana dusha iska saarayo meeriska dhextaalka u ah ayaa fannaaniin badan u noqday halqabsi joogto ah. Meeriskaas iyo kuwa laga dheegtay waxay yihiin: gardarriyee maxaan Hodan Cabdaay kaaga go’i waayey Qaraami: boggayga waran baad badheedh u dartee bagaad i dishoodan ii bixin … booqasho keliyaa badh iga hadhayee bagaadan ina soo bariidayn … baroordiiqdu maydka waa ka badhe bagaanad islahayn ‘biyaan qubay’ Run ahaantii ujeeddada halkan ku jirtaa ma aha in eedda la isa saarayo ee qofka la jecel yahay ayaa denbiga lagu badinayaa si loo beerlaxawsado. Waxay la mid tahay marka qofka lagu yidhaahdo: Aniga ayaa kaa gardaran oo wax ku waydiistay. Boodhari: cududuhu ma naaxaan ninkay talo ku ciirtaaye casharkay wadaaddadu qoreen cudurkan goyn waaye = tahliil cilmi iyo dawaba doontay oo waayey cilinkiiye = halka ay cilladdu ku jirto Hees: Allaa i badee caashaq waa belo oo ma buurra ninkuu barriinsadayoo jidhkayguu beddeluu ka buuxsamayoo bakhtiin kari waayey boog shidanoo Burdahaan ku akhriyi in uu baxo Saamaynta Boodhari ee heesihii hore ku jirta waxaa la mid ah ta ku jirta heesaha dambe. Eeg: hawada beena xalay baan is-idhi waad la huruddaaye hareertayda madhan baan is-idhi haabo gacanteede kolkii aan hubsaday meel cidla ah inaan ku hawshooday u haylhaylay gogoshii sidii halablihii aare siday iga halleeyeen maryihii hiifay oo tumaye Hees: xalay gelin dhexaadkii mar aad gacalo ii timid ooy gacantu laabtiyo kuu salaaxday gaaddada… ma ka toosay gagi madhan gogoshaan ku jiifiyo ma guhaadshey aqalkii
ku soo dhaway abwaankii jacaylka
Gabaygan soo socda waxaa tiriyey abwaankii jacaylka Cilmi Boodhari wuxuuna kula hadlayaa Hodan tii uu jeclaa iyo naftiisaba. Hodan wuxuu leeyahay kaa joogi waayey oo kaa jiifu waayey waxaan kuula hadhayna ma jirto si walba kuula hadlay iina jixin jixi wayday. Markaa wuxuu leeyahay hadii ay caykaas tahay maxaan kuu dayn waayey een kuu daba socdaa?
Intaan adiga kugu gooni ahaa geed hadaan la hadlo
Ama aan gawaan qodayo may gama’sanaateene
Gaaladu ha joogtee sidaa gacal ma yeeleene
Gardarniyaa maxaan Hodan Cabdaay kaaga go’i waayey?
Sidii aad go’aygii tahiyo macawistaan goostay
Ama aad godkii aakhiriyo geeri iga baajin
Ama aan gayiga lagu ogayn gabadh kaloo joogta
Gadiidkii aan toosaba adaan kuu guntanayaaye
Goobtaan istaagaba dhulkaan godad ka jeexaaye
Sidii aad gidaar tahay maxaa kaa igarab taagay?
Mana goosan kari waayin oo geesi baan ahaye
Adaan kaa gungaadhaayey oo helay guntaadiiye
Haatanse waan guursan hadii guule ii wacaye
Oon weliba gedahaaga ka dayan goboladiiniiye
Iyadoo gadiid u eg markaan Gu’ga kaxaynayo
Ee aan Gahaydhiyo la tago Gubanadii Hawdka
Ee aan ganuunta ugu shubo gooha labankeda
Geblayda iyo ciyaaraha markuu geeljiruhu tumayo
Ha gayoobin, waataad lahayd gool jabaan helaye.
Jaceylku waa shey qaali ah oo ku lamaansan jiritaanka Nolosha Aadanaha , Jaceyl ma ahan wax laga maarmi karo magaca uu wato ayaad ka garan kartaa oo qof waliba ayaa wax uun jecel.
Lixda Xaraf ee uu Erayga jaceyl ka kooban yahay asal ahaan dadka caashaqa lafa gura mid waliba micno gooni ah ayey ku idbaareen, waxa ayna ka dhigeen Erayo Macnayaal dhameystiran leh oo la isku geeyey kuwaas oo kala ah.
Hadaba Erayadan waxa ay mid mid u muujinayaan Jaceylka iyo waxa lagala Kulmo, Run ahaantii mar waa jahawaree, Marna amakaag ayuu kugu ridaa, mar waa la calaacashaa, mar Anfariir, mar yaab marna waa Farxadoo Luul ayuu luqunta kuu galiyaa.
Bal markan eeg Erayga jaceyl marka luuqada Ingariiska loo dhigo LOVE isna waxa uu noqonayaa sida tan.
L—Lack of Pleasure( Faraxad la’aan)
O—Ocean of madness ( Bada Murugada)
V—Vellay of Death ( Dooxada Dhimashada)
E—End of live ( Dhamaadka nolosha)
Hadaba macnaha kooban ee jacaylka waa macaan, iyo Wareer hada sida qofka u asiibo u soo maro hadii jaceylka Lamaanayaasha isla walwaalaya mid waliba uu dhankiisa ka waraabinayo waa macaann Farxad iyo guul, iyo Baraare marka uu qaraarka noqonayo ee dhimashada iyo dhibaatada halista leh uu sababayo waa marka laga waraabinayo hal dhinac oo qofka uu jaceylku ku dhaco qofkii uu jaclaaday aanu la wadaageynin oo labadii shaqsi uu midkood kali ku noqdo.
Jaceylka waxaa la sheegaa in Aabihiis uu yahay Nasiibka , Hooyaddiina Calafka walaalihiisna dadaalka dadka uu jecel yahay waa kuwa runta iyo daacada uu ka yahay, kuwa uu neceb yahay waa kuwa ka been sheega kuna qaraabta ee daacada aanu ka ahayen Dookha ayey hishiis iyo Saaxibo wada yihiin Waxa uuna jaceylku ka yimaadaan Dareenka waxa uuna degaa Qalbiga.
mar labad kuso dhawow father of the love
Gabaygani wuxuu ka mida ahaa gabayadii taxanaha ahaa ee uu Cilmi Boodhari kaga hadlayey jacaylkii uu Hodan u qabay. Gabaygan wuxuu Cilmi si gaar ah ugaga hadlay sida uu Hodan aduunyada hablaha jooga oo dhan uga doortay iyo quruxda Ilaahay uu siiyey.
Waxaan huguguf leeyaba dhakhsaan ku hor imaadaaye
Sida halo kareebaan saqdhexe soo horanayaaye
Sida ubadku hooyada u tebo kuu hafeeftamaye
Hadii aanan kulahayn yartaay kuma haleeleene
Habeenkii yimaadaba lixjeer kuma horjoogeene
Hal abuurka kuum aaan tirsheen heesta caashaqa e
Bal hor joogsi daayoo anaan haynin aragaaga
Hareertayda ood joogtidbaan ku hami qaataaye
Markaasaan humaagiyo cidlada ku hambalyeystaaye
Hilinkaynu maridoono iyo hooy ku taamaaye
Hagaageena iyo khayr ayaan ku hindisoodaaye
Markaan keligeey haasaawayee aan islahadlaayo
Ayagoon wax hubinoo ogeyn waxa i heeteeyey
Dadku waxay u haystaan inaan dhigay hugeygiiye
Hadaaq ay wax sheeg-sheegayaan uma haboonayne
Haabkooda may gelin cishqiga hawsha daba taale
Inta uu hadhuudhlaha kudaray ama hed soo gooyey
hal-hal tirada waan lagu heleyn taniyo Haabiile
Anigana haduu igu shakalay hadimadiisiiye
Imikuu u hees yidhi gab’dhaa taan hanteen rabaye
Aniguna hensii kaama lumin u halgankiisiiye
Waa waxan hadhuub ugu sitaa hoorka caashaqa e
Waa waxan dhul heegadu martiyo Hodan u geeyaaye
Waa waxan haboow uga jiraa horukac mooyaane
Waa waxan hirdoogliyo caleen ugu horseedaaye
Hablahoo dhan keligaa yartaay hibeda laysaarye
Sida hogol kaliishii da’doo milicdu ay-hayso
Ama lebiga hawdoo gugii ubaxu heeryeeyey
Oo haadku dhaafoo shinbiro cimilo goor heesa
Aadmigu ma hilayee dhakhsuu ugu hiloobaaye
Anna xiisahaan kuu hayaa kaba hanaan dheere
Ninba tuu ka helay buu gabdhaha Hodan ku sheegaaye
Oon heerkastay qurux ka tahay hawlin taa kale’e
Anna dookhu adiguu huwadey kuna hareer yaale
Qaar buu gabdhaha hilibku iyo hugu cusleeyaaye
Adna inaanad haabkaa ahayn hubiyey dhawrjeere
Naasahan sidii hooto waran hore u soo taagan
Dibnahaagan hiifkaba aqoon hadal san mooyaane
Gudub halacsi daymada indhahan hibada loo siiyey
Qosol hanaqa soo taabayoo caashaq hurinaaya
Ilka aan hogoodii ka lumin kalana hoosaynin
Sankaagaa hanaankiyo qorshaa hadiyad loo siiyey
Dhabanada hareeraha wejiga halalac nuuraaya
Suuniyaha haabkoodan wacan hadal dhamayn waaye
luquntii habkii geri lahaa halal wax dhaafsiisey
Timo hoos garbaha uga degoo sinaha haab-haabtay
Heega iyo laafyaha gamcahan hibada loo siiyey
Dhaxdan aan hareeraha u fidin horena soo taagmin
Hanaan quruxsan waataa luguu ka haqab beeleene
waxa diyaariyay Lee-mukhtaar ramadaan)
Walaalayaal ku soo dhawaada gurigayga kulayl qaboow maxaad cabaysiin? ha is martiyaynina walaalayaal waxaan ugu tala galay gebi ahaanba pagekani in looga hadlo oo la isku dhaafsado qof waliba aragtida uu ka qabo jacalka marka please feel free every body inuu ka hadlo aragtidiisa.
Culimada Aduunka, Caafimaadka baartay, Cudurada la dabbargoynayo, Caashaqa ha lagu daro” Abwaan Maxamuud Tukaale wuxuu bilowgii sanadihii toddobaadyameeyadii ka codsaday aqoonyahanada adduunka, gaar ahaan kuwa baara cudurada aadamiga ku dhaca in cudurka Caashaqa la yiraahdo ay u helaan dawo lagu daryeelo. Abwaan Tukaale weliba intaas wuxuu ku daray, gabi ahaanba in cudurka Caashaqa la yiraahdo lagu daro cudurada Adduunka ee la dabbargoynayo! Haddaba Jacaylku ma dhabaa, mise waa…Dhalanteed? Ma Cudurbaa mise waa.. ? Hadduu cudur yahay dawo ma leeyahay?
Waa tan qalin lagu xariiqay, garyaqaano badan ka doodeen, qoraalo badan oo kale gedisana lagu qoray. Markey wiil iyo gabar qaangaar dareen jaceyl ahi galo, wuxuu mid walba is-weydiiyaa waa maxay jacayl? Ma jiraa jaceyl? Talow ma dhabaa mise waa dhalanteed…..?
Balse carruur iyo ciroole intuu Caadil abuuray wax bay cashaqaan, iyadoo weliba lagu kale dareen duwan yahay oo fikrado qalifsan lakala aamminsan yahay. Waa tan wiilka iyo gabadhu ay wada qoslaan, oo waxyaabo qaas ah mararka qaarkood ay is-dhaafsadaan. Kolkuu wiil jeclaado gabar oo uu quruxdeeda la dhaco, dabadeedna dib u milicsado wejigeeda ayuu wadnaha qac yiraahdaa, oo quwad dahsoon ee aan muuqan dhankeeda u jiidataa, indhahana kor u tagaa, sidii qof nafta laga siibayo oo kale. Waxaa ka soo daata, oo shabax ka soo yiraahda wejigiisa iyo oogadiisa oo dhan dhidid kulul, isagoo daaqadaha ku gadooda, si uu u helo neecow qabob oo qancisa naftiisa kulul. “Alla yaa tan hal habeen la caweeya, oo gaari qaali ah ku qaata” Ayuu uurka ka yiraahdaa.
Raggu waa seef la bood, hadba tii ay arkaan oo bilicsan bey yiraahdaan “Allaylahe! Waa tan tii aan doon-doonayay” Dumarkuse waa seef la qaad hadba kii u af-macaaneya ayey yiraahdaan “Allaylahe! Waa kan kii aan baadi-goobi jiray”.
Alla qurux badanaa ma xuural-ceyntii Janadaa?. Tani maba’aha tii uu iskuulka ama shaqada ku arki jiray, hadalo aan loo baahneyn ayuu ku hantaaqdaa, “Maxaad halkaan ka qabaneysaa, xaggee deggen tahay” uun buu la soo boodaa, goortay indhihiisa qabtaan inan ilwaad qurxoon. Khayr laawe! Waa inantii deriskiina ahayd, ee gurigga idinka soo horjeeda degneyd. Kolkaad miyir beesho, oo qalbigaagu si xun u qayirmo ayaad mar kale is tiraahdaa “Alla nasiib badnaan laheydaa haddii aad qoftaan maalin kula saan-qaadi laheyd, hal qol ka soo wada toosi laheydeen, oo aqalka kuu dhex joogi laheyd, sidii gabar yar oo makhbiya ah oo kale” Intaad dib u soo baraarugta ayaad qosol aan lagula wadaagin gashaa. Waxaad jeclaataa arageeda, meel walba oo ay joogta ayaad ku meer-meeraysataa; Telefan wacid ayaad ku waalataa, qof weliba oo aad taqaanid ayaad wanaageeda uga sheekeysaa, qofka aan iyada garaneynin waxaad ku qasabtaa inaad bartid ama sawirkeeda tustid, kii kugu caayo oo aan amaanin iyada ayaad la calowdaa, oo saaxiibtinimada u jartaa.
Alla Jaceylku dhib badanaa, oo muxuu yahay?. Sidiisaba, Jacaylku ma dhabaa, mise waa dhalanteed? Waxaa kugu soo kordha wel-wel faro badan, dareen joogta ah, niyad jab, tabar dari, daal, cuntada oo aad ka soonto, oo aadan waxba dhadhamin; naftaada oo aad daryeeli weydo; xanaaq badan oo aadan garaneynin meel aad ka keentay; dabeecad qalafsan, iyo dadka oo hadalkooda ku dhiba, gaar ahaan dumarka ha u badnaadeene.
Waxba yaanan hadal kugu daalin, anigu ma’ihi Dektoorkii Jaceylka, laakiinse jaceylku waa wax jira oo dhaca maalin weliba, saacad walba, daqiiqad iyo il-biriqsi walba, kana dhaca goob weliba dunida afarteeda dacal. Markaad dib u milicsato qoraalkeyga ayaad oranaysaa:“Alleylahe Waa runtii ama maye anigu ma aamminsani waxa u sheegayo . Kolkaadse ereyadeyda hal-hal u aqriso oo maskaxdaada ku dhacaan baad wareertaa, dhulkuna kula wareegaa sidii adiga oo wiifoow saaran oo kale. Kursigaaga xejiso, oo ha ka dhicin. Waxaa sii kordha is-garaaca wadnahaagga; biyaha cabistooda ayaad basataa; gacmaha ayaa ku gariira sidii ruux ay la-leemo ku dhacday oo kale; waxaani waa jaceyl wuu ka burji weyn yahay, kana quwad weyn yahay, ka dibna cistibaal iila carara tiraahdaa. Waxyaabaha kaa sii waalo oo xiiso hor leh kugu beera, waa arageeda oo si joogta ah aad u aragtaa. Waxa kale oo kaa sii waala mar qof iyada yaqaan uu kaga sheekeyo. Waxa macquul ah qofka aad sidaan u doon dooneysid inuusan kaa war qabin inaad tahay qof jira oo jecel. Xubnaha jirkiisa oo jajabo nasasho la’aan awgii, dabadeed intaad is hayn kari weydo ayaad waxaad ku dhuumataa gidaarada ama meelaha ubaxa leh ee dadku ku nastaan.
Kolkaad haween dhoola-cadaynaysa aragtid ayaad waxaad iska dhaa-dhacsii inay iyada tahay, weliba iyadoo ku leh:“Gacaliye, maxaad qabaneysaa galabta” Degdeg intaad u soo haado ayaad tiraahdaa “Gacaliso, waxba ma qabanayo, halkaan ayaan u soo nasasho tagay, ee xaggeen aadnaa” goortay ku dhaaftay maba garatid, qof kula hadlayay iyadaba ma’ahayn waa niyadaadii oo isla hadlaysay ee KA BUL-DHEH……Sidaas ayaad ku garataa inuu Jaceylka dhab yahay, cudur xun ee aan daawo laheyn yahay ee kuwaan aamisneyn, waa kuwa habeen weliba telefonka ku calaacala, oo nafsadoodii qiyaamay. Kolkey goobaha dhalinta ku kulmaan aragtid ayay yiraahdaan saaxiib anigu ma aaminsani jaceylka inuu dhab yahay oo uu jiraba
waxa soo diyaariyay Lee mukhtaar ramadaan
haka caajisana walaalayal waxan insha alaah idinsoo dhigayaa sheekooyin xiiso badan oo aad u bogi doontaan
← your brain just brighter!
JACAYLKII KADEEDNAA EE ABWAAN XASAN JACAYL →
Liban mukhtar ramadan Email:rabadaan2@gmail.com
Liban Mukhtar Avobankz
Liban Mukhtar- East African Peace Building and Development Practitioner+ Global Researcher and Free Writer
Massage ma la isku Guursadaa Mise waa La’isku Furaa..? (Dhacdo Cajiib ah)
Set Your Long-term Ambition Successfully!
“Th General Meaning of SOS”
Duluf “Dal iyo Duunyo”
Categories Select Category bogga diinta (8) dhaqanka guurka soomaalida (1) dhaqanka soomalida (1) education (3) gabayo (5) heeso (27) jacaylka (16) my pictures (8) sawiro jacayl (7) liibaan's background (2) suugaan (5) Uncategorized (66) wararka (5)
bogga diinta dhaqanka guurka soomaalida dhaqanka soomalida education gabayo heeso jacaylka liibaan's background my pictures sawiro jacayl suugaan Uncategorized wararka
caato cali maxamad on su’aalo & jawaabo
Moh0med Yonis on heeso:midho jacayl…..!
Yaasiin c/weli axmad maxamed on axkaanta soomida bisha ramadaan ee barakaysan
Wilbert on fadliga bisha barakaysan ee ramadaan
entrepreneur électricien Boisbriand on be my destiny!